Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment सत्याग्रही डा. केसीको जीवनमाथि राजनीतिक अभिष्ट राख्दै खेलवाड नगरियोस् : समाजवादी विद्यार्थी युनियन - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, १३ असोज : सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको लागि समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएका केसीको जीवनरक्षाको माग गरेका हुन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्नका लागि पटकपटक सत्याग्रहमार्फत् सरकारलाई दबाव दिँदै आएका आदर्श व्यक्तित्व डा. गोविन्द केसीले पटकपटक आमरण अनशन बस्दै आएका छन् ।
संगठनका श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले उहाँको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धतासहित सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने चरम उदासिनता देखाउँदै आएको पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’
‘डा गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको एक असल, सादगी जीवनशैलीसहित जनसमुदायको सेवामा समर्पित व्यक्तित्व हो । उहाँले हरेक दलको सरकारसँग निरपेक्ष ढंगले निरन्तर संघर्ष गरिरहनु भएको छ। उहाँमा दलगत स्वार्थ कहिँकतै देखिँदैन ।,’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको चिकित्सकहरुले बताउनुभएको छ। उहाँको मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्दै जीवनरक्षा गर्न समाजवादी विद्यार्थी युनियन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
डा. गोविन्द केसीको जीवनमा लाखौं जनसमुदायको आशा र भरोसा अडिएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सरकारले डा. गोविन्द केसीको जीवनमाथि राजनीतिक अभिष्ट राख्दै खेलवाड नगरोस् । समय धेरै छैन । यदि एक सत्याग्रहीले सरकारको बेइमानीका कारण अनसनकै क्रममा जीवन गुमाउनु पर्‍यो भने त्यसपछिको परिस्थिति भयानक हुनेछ। उक्त परिस्थितिको जिम्मेवार पनि सरकार नै हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’